Miresaka an’i India i Gandhi sy ny YouTube · Global Voices teny Malagasy
Miresaka an'i India i Gandhi sy ny YouTube
Voadika ny 18 Aogositra 2017 2:48 GMT
Niteraka onja kely tery ampitan'ny tanibe ny lahatsarin-kira iray avy amin'i Gautam Prashad, teratany Indiana iray monina ao New York, mpampianatra hatsikana/fampihomehezana/yoga, ahitàna an'i Mahatma Gandhi tamin'ny YouTube nanao dihy manintona. Tsy faly tamin'ny fandikàna maoderina nataon'i Prashad mikasika an'i Gandhi (ilay Rain'ny Firenena any India) ny governemanta Indiana ka nandrara ilay lahatsarin-kira tao India. Tsy maintsy nofafàn'ny Google ilay horonantsary. Miampy an'ireo fantsn indiana maromaro izay nampiseho ilay lahatsarin-kira nangatahana hiala tsiny. Ilay mpanala baraka voalohany tazan'ny mason'ny governemanta Indiana: Gautam Prashad koa niala tsiny.
Tamin'ny taona, nahazo ny anjarany ara-drariny tamin'ireo sedra tao India ny Google. Voalohany indrindra, ny Orkut, ary ankehitriny ny Google Video. Ahoana ny fihetsik'ireo Indiana bilaogera mikasika ity lahatsary Google misy an'i Gandhi ity? Mandrakotra ny sehatry ny fahalalahana miteny manontolo ny fihetsik'ireo bilaogera, avy amin'ny fahalalahana miteny mankany amin'ny tsy hijery fotsiny sy ny fandàvana mafy tsy famelàna antsika hihetsika, sa tsy izany?
Tsy faly tamin'ilay lahatsarin-kira nataon'i Prashad i Pooja Nair. Levona anatin'ireo anatra sasantsasany mikasika ny asa ho an'i Prashad avokoa ny fandàvana henjana avy aminy. Manoratra izy fa:
Miala tsiny aminy aho. Tsy nihevitra akory ny haneso azy. Nahatsiaro ho sahirana fotsiny tamin'ilay hevitra aho. Mety hiova asa izy araka ny fihevitro. Angamba mety hahavita tsaratsara kokoa izy raha mpanatitra pizza na mpamily fiarakaretsaka.
Izao no nolazain'i Shivam Vij mikasika ilay lahatsarin-kira: aza mijery raha manafintohina anao ilay izy. Ny lahatsoratr'i Shivam koa dia manana valinteny iray avy amin'i Prashad, mpamorona ilay lahatsarin-kira ahitàna an'i Gandhi, izay milaza fa resaka ara-barotra no nampiasàny iny lahatsarin-kira iny.
Manontany tena i Amit Verma raha toa ity fizaràna ity ka:
Lasa miha-tandindonin-doza ny fahalalahana miteny eto amin'ity firenena ity.
Great Bong, izay mihevitra fa maharikoriko ilay lahatsarin-kira dia nilaza an'izao momba ny fihetsiky ny governemanta indiana manoloana ilay lahatsarin-kira:
Raha hiverenana ny tany am-boalohany, ny governemanta indiana no tena maty antoka indrindra amin'ity fisehoana amim-boninahitra ity, izay tena misisika mafy hitondra tena mitovy amin'ny fanjakana silamo adaladala manao fomba famaly ratsy amin'izay faniratsirana rehetra mitranga. Ao anatin'ireo fahendreny tsy manampetra, naroso ho toy fanehoana tranga tany amin'ireo fantsona indiana, izay nanao ireo vaovao izy io,ary nangatahana hanaisotra ilay lahatsary sy hametrahana fandraràna ao amin'ny YouTube.
Toy ny manome topimaso ho an'ilay fizaràna manontolo ny fileferana / fanilihana azy (tsy hoe tsy miasa akory ny YouTube) ary milaza fa fotoana izao hitadiavana zavatra hafa.